Unofanira Kuvaka Nhare mbozha App kana Nhare Siti? | Martech Zone
Chitatu, June 6, 2012 Adam Mudiki
Ini ndaigara ndichifunga kuti mobile apps dzaizoenda nenzira yedesktop software asi hazviite senge huwandu hwemaapplication huri kuchema zvachose. Zvakapesana kwazvo, mapuratifomu aunogona kuvaka mafoni ekushandisa ari kuva anodhura mazuva ese (isu takavaka yedu iPhone App paAppifier ye $ 500)… uye mazhinji acho ari kutsigira zvese piritsi uye nhare pane chero chishandiso kana chikuva.
Sarudzo pakati pekuvaka webhusaiti mbozha kana yekushandisa nharembozha pakupedzisira sarudzo yakasarudzika kune rako bhizinesi Kana zvichibvira, makambani anofanirwa kuvandudza zvese zviri zviviri kuitira kuti awedzere aya mapuratifomu ane simba. Kana paine mumwe chete anogona kusarudzwa, bhizinesi rinofanira kutanga ratarisa zvinangwa zvavo nezviwanikwa, zvonyatso tarisa mutsauko wakatsanangurwa muiyo infographic uye nevateereri vavanoda kusvika. Ipapo chete ndipo bhizinesi parinogona kutaura zvechokwadi kuti ndeipi nzira mbozhanhare ichapa kukosha kwakanyanya, zvakanakira, uye mikana nemusika mukuru we mobile.
Ini ndinotenda kuti munhu wese anofanira kunge aine webhusaiti webhusaiti, zvisinei kuti urikufunga kana kuti kwete. Idzo nhamba dzinoenderana kuti vanhu vari kutarisa email, vachivhura saiti, kushopota uye kuona mavhidhiyo kubva kune avo nhare mbozha kupfuura nakare kose… uye nhamba dziri kukura. Nepo nharembozha yekuvandudza webhusaiti ichibvumidza yakati wandei kuchinjika, kunyorera kuchiri kupa zvakawanda, zvimwe zvakawanda.
Unofanira Kuvaka Nhare mbozha App kana Nhare mbozha? by MDG Kushambadzira
Tags: Mobile Anwendungkusimudzira nharenharembozhanharembozha webhusaiti
Ini ndakaraira vamwe kuti vatore kunyatso kuoma kutarisa kuti kana vaizonyatsoda nhare mbozha. Ini ndinofunga kumabhizinesi madiki madiki, ivo vanofanirwa kutarisisa kumuka yakanaka webhusaiti webhusaiti kutanga vafunga nezve Google inoranga iwe nekuda kwekusave neyako. Zvino, gare gare kana iwe ukaona kukosha kweiyo nhare mbozha, unogona kuwedzera nyore imwe yeavo vanotsamwa mafeni.
email siginicha fomati
Ndira 9, 2013 na4: 37 PM
Mubvunzo unovhiringidza, asi ini ndinofunga mobile webhusaiti ndiyo yakanyanya kunaka kutanga nayo uye gare gare kana uchida, unogona kuenda kuApp.